အမှန်တကယ်မှန်ကန်သောဂျပန်တွင်နေထိုင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောပုံစံများ (နှင့်မနည်းနည်း) - နှုန်းထားများ
ကျွန်တော့်ရဲ့နောက်ဆုံး ၂ နှစ်အထက်တန်းကျောင်းအတွက်ဂျပန်မှာနေထိုင်ခွင့်ရခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်အဖေကအမေရိကန်ရေတပ်မှာရှိပြီးသူဟာဂျပန်နိုင်ငံ၊ ယိုကိုစူကာမှာရှိတဲ့အမေရိကန်ရေတပ်အခြေစိုက်စခန်းကိုရောက်ခဲ့တယ်။
ငါအွန်လိုင်းအခြေစိုက်စခန်းမှာနေခဲ့ပေမဲ့ယိုကိုဟားမားလို့ခေါ်တဲ့အခြားမြို့တစ်မြို့ကနိုင်ငံတကာကျောင်းကိုတက်ခဲ့တယ်။ နှစ် ဦး စလုံးသည်တိုကျိုgreaterရိယာ၏ကြီးမားသောမြို့ကြီးများဖြစ်သော်လည်းယိုကိုဟားမားသည် ပို၍ ကြီးမားသောမြို့ကြီးဖြစ်ပြီးတိုကျိုနှင့်အနည်းငယ်နီးကပ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အမေရိက (အခြေစိုက်စခန်းသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏မြေဆီလွှာဖြစ်သည်) နှင့်ဂျပန်နိုင်ငံတို့အကြားအစဉ်မပြတ်ထွက်ခွာသွားခြင်း၏ထူးဆန်းသောအနေအထားတွင်ရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်အမေရိကန်နှင့်ပတ်သက်သောဂျပန်ပုံစံပုံစံနှင့်ဂျပန်နှင့်ပတ်သက်သောအမေရိကန်ပုံစံကျမှုများကိုကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ဒီတော့နောက်ထပ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုမရှိပဲဒီမှာဂျပန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်တွေမှာရှိခဲ့တဲ့တကယ့်ပုံစံအမျိုးမျိုး (နှင့်မှားယွင်းတဲ့သူအချို့) ဒီမှာပါ။
ရထားဘူတာရုံတွန်းတင်သူများကသင့်ကိုကိုင်တွယ်လိမ့်မည် - ဟုတ်တယ်
လှပသော ၀ တ်စုံ ၀ တ်ဆင်ထားသောဂျပန်လူမျိုးအမျိုးသားများနှင့်ယူနီဖောင်းများကိုအဖြူရောင်လက်အိတ်များဖြင့်လူများကိုလူသားအရွယ်အစားရှိသော Sardine ဘူးများထဲသို့ညှစ်ထည့်ထားသည်။ အလုအယက်နာရီအတွင်းမြို့ကြီးများရှိရထားဘူတာများသည်လူစည်ကားလာပြီးရထားဝန်ထမ်းများသည်လူများကိုကားများသို့အတင်းအကြပ်ခိုင်းစေရသည်။ ကျွန်တော်ဂျပန်ကိုမသွားခင်တွန်းထိုးတာဟာဒဏ္myာရီလို့ထင်ခဲ့တယ်။ သူတို့မဟုတ်ပါ။
ဤသည်ကိုသင်မိုင်ကီလိုမီတာအဘို့အမြင်ရပါလိမ့်မယ်တစ်ခုတည်းသောသည်အခြား gaijin ဖြစ်ပါတယ်
ဂျပန်သည် ၉၈.၅ ရာခိုင်နှုန်းရှိသည်။ အရှေ့အာရှသာမကအာရှသာမကဂျပန်တွင်နေထိုင်သောလူ ဦး ရေ၏ ၉၈.၅ ရာခိုင်နှုန်းတွင်မိဘများသည်ဂျပန်၌နေထိုင်သောမိဘများရှိသည်။ အမေရိကန်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသော Yokosuka မြို့တွင်နေထိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်အမြဲတမ်းစားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်၊ စတိုးဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင်သို့မဟုတ်ရထားတစ်စီးတည်းတွင်ဂျပန်မဟုတ်သူတစ်ယောက်သာဖြစ်သည်။ ငါ Blonde Gaijin (ဆံပင်ရွှေရောင်နိုင်ငံခြားသား) အဖြစ်နှစ်နှစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
ဒီနေရာမှာအခြား gaijins နှစ်ခုရှိပါတယ်! ကိုယ်စားပြု
သူတို့ကအခြေခံအားဖြင့်အရာအားလုံးကိုရောင်းချကြသည်။ နံနက်တိုင်းငါရထားကျောင်းသို့မသွားမီအရောင်းစက်မှ o-cha (လက်ဖက်စိမ်းအစိမ်း) ပုလင်းတစ်လုံးရလိမ့်မည်။ ဒါမှမဟုတ်ငါပင်ပန်းနေရင်ကော်ဖီသောက်တော့မယ်။ အတွင်းခံအဝတ်အစားတွေလိုအရောင်းစက်တွေလည်းရှိသေးတယ် (အသုံးများတဲ့ - အတွင်းခံအရောင်းဆိုင်အရောင်းဆိုင်ကဒဏ္isာရီတစ်ခုပါ။
သင်၏ဖိနပ်ကိုချွတ်ရမည့်အရာ - မှန်ပါသည်
ဟုတ်ပါတယ်, သင်ဘယ်နေရာမှာမဆိုသီးသန့်မဝင်ခင်ဖိနပ်ကိုချွတ်ရမယ်။ တိုက်ခန်းအားလုံးနီးပါးမှာသင့်ရဲ့ဖိနပ်ကို ၀ တ်ဆင်ရန်အတွက် ၀ င်ပေါက်တစ်ခုစီရှိသည်။
လူတိုင်းကျောင်းဝတ်စုံကို ၀ တ်ဆင်သည်။ ဟုတ်ပါသည်
သူငယ်တန်းမှအထက်တန်းကျောင်းပြီးသည့်အထိကက်သလစ်ကျောင်းသို့သွားသောလူတိုင်း။ plaid ၀ တ်စုံ ၀ တ်ထားသောမိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားလေးများသည်နေရာတကာတွင်ရှိပြီးမကြာခဏလမ်းဘေးတလျှောက်လုံးလျှောက်လှည့်နေသောအဖွဲ့များကိုလှည့်ပတ်ကြသည်။ အလေးအနက်ထား - တစ်ခါတစ်ရံတွင်စည်းမျဉ်းများသည်နားကပ်နှင့်ဆံပင် (undyed) တို့ကိုပင်ထိန်းချုပ်သည်။ တစ်ယောက်ယောက်ကကောလိပ်ကျောင်းဒါမှမဟုတ်အထက်တန်းကျောင်းမှာဆံပင်အရောင်အားဖြင့်သင်ပြောနိုင်သည်။ ကလေးငယ်တွေဟာအထူးသဖြင့်ချစ်စရာကောင်းတယ်။ သူတို့မှာတူညီတဲ့ ဦး ထုပ်တွေရှိတယ်။
ယန်း ၂၄၀၀၀ သည်… (နှစ်ခုကိုယူပါ၊ ၁၀၀ ကိုစားပါ) …။ နှစ်ဆယ်လေးဆယ်ဒေါ်လာ!
ဂျပန်လူမျိုးများသည်အစားအစာများကိုအလေးအနက်ထားကြသည် - အလွန်လတ်ဆတ်ပြီးအရည်အသွေးကောင်းသည့်မက်မွန်သည်ယန်း ၁၀၀၀ အထက် (သို့) ၁၀ ဒေါ်လာအထိရနိုင်သည်။ ထိုမက်မွန်သီးတစ်ချောင်းသည်သင်၏ဘ ၀ ၌အရသာရှိရှိအကောင်းဆုံးရင့်ကျက်သည့်မက်မွန်သီးဖြစ်လိမ့်မည်။ နေရာဒေသအလိုက်အစားအစာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။ မတူကွဲပြားတဲ့မြို့ကြီးများ (နှင့်အနီးဝန်းကျင်ဒေသများ) ကိုသူတို့ရဲ့ဒေသဆိုင်ရာခဲဖွယ်စားဖွယ်များသို့မဟုတ်အချိုပွဲများကြောင့်လူသိများလိမ့်မယ်။ သင်ခရီးထွက်သည့်အခါတိုင်းသင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအားထိုခဲဖွယ်စားဖွယ်၏ omiage (လက်ဆောင်များ) ကိုသင်ပြန်ပို့လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
ဂျပန်မှလူများသည် tentacle porn ကိုနှစ်သက်ကြသည်
tentacle porn ရှိပါသလား? ဟုတ်တယ်။ Is လူတိုင်း တကယ်ချစ်စရာရေဘဝဲကို ဘယ်ဟုတ်မလဲ။ လုံလောက်ပါတယ်
သငျသညျ tentacle က porn ကိုသင်မျှော်လင့်ထားသလော ယုန်ဝမ်းနည်းနေသည်
လူတိုင်းဟာ Akihabara ယဉ်ကျေးမှုထဲကို ၀ င်နေကြတယ်
US မှာဂျပန်လူမျိုးတွေဟာအလွန်ထူးဆန်းတဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေရှိပြီး anime ဇာတ်ကောင်တွေလိုဝတ်ဆင်လေ့ရှိတယ်။ ဂျပန်လူမျိုးဟုလူအများယူဆသော (anime, kogal, cosplay) ဂျပန်လူမျိုးကို otaku (geek) ယဉ်ကျေးမှုဟုထင်မြင်ကြသည်။ ဒါဟာတကယ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး။ ပြောရမယ်ဆိုရင်လူတိုင်းလောက်က One Piece ကိုဖတ်ပြီးလူ ဦး ရေအချိုးအစားအားလုံးအတွက် anime အမျိုးအစားတွေရှိတယ်။
တကယ်တော့ဂျပန်ဟာအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ရှေးရိုးဆန်ပြီးမကြာခဏလိင်အရအခွင့်အရေးချိုးဖောက်တဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းပဲ။ ဂျပန်လူ ဦး ရေ၏ ၃၃ ရာခိုင်နှုန်းသည်အသက် ၆၀ အထက်ဖြစ်ပြီးဆိုလိုသည်မှာစုစုပေါင်း Vibe သည်ရှေးရိုးစွဲဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများသည်အိမ်ထောင်ပြုပြီးသည်နှင့်အလုပ်မှထွက်ရန်အများအားဖြင့်တိုက်တွန်းထားသည်။ ကျွန်ုပ်သည် Aikido ဒိုဂျို၌အမြဲတမ်းတစ်ခုတည်းသောမိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ငါနေခွင့်ပေးလိုက်တဲ့တစ်ခုတည်းသောအကြောင်းပြချက်ကမှိုကိုငါအများကြီးချိုးဖျက်လို့ (gaijin, မိန်းမ၊ Konichiwa မိန်းမပြောတာ) သူတို့ချွင်းချက်လုပ်ခဲ့လို့ပဲ။
ဆောင်းပါးတစ်ခုလုံးကိုဖတ်ရှုခြင်းအတွက်အကျိုးကျေးဇူးအဖြစ် - Yokosuka နှင့်ပတ်သက်သောပျော်စရာကောင်းသောအချက်ဖြစ်သည်။
မင်းရဲ့အဘိုးအဘွားတွေက hunky-dory လို့ပြောပြီးငရဲဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲလို့မင်းတို့ကြားဖူးမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာအဖြေပါ။ အဆိုပါစကားလုံး Yokosuka မှမူလကဖြစ်ပါတယ်။ Hunky-dory သည် Yokosuka ရှိလမ်း၏အမည်တစ်ခုဖြစ်သော Honcho-dori ကိုဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်သည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးတွင်အမေရိက၌ဂျပန်၌လိင်အငတ်ဘေးဆိုက်နေသောသင်္ဘောသားများနှင့်စစ်သားများရှိသည်။ ထိုလမ်းစဉ်တွင်ဤလမ်းတွင်ပြည့်တန်ဆာရုံများနှင့်ပြည့်တန်ဆာများရှိသည်။ အရာအားလုံး hunky-dory မူလကငါအလောင်းတော်ကိုရတော့မည်အကြောင်းကိုဆိုလိုသညျ။